September 1, 2021 - Online Hartha
တက္ကသိုလ်တွင် ထူးချွန်စွာဖြင့် ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည့် ကောင်မလေး၏ မိသားစုအခြအနေကို သိလိုက်ရသောအခါ လူအများမှ မျက်ရည်ကျခဲ့ရသည့်အဖြစ်
September 1, 2021 by Online Hartha
တက္ကသိုလ်တွင် ထူးချွန်စွာဖြင့် ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည့် ကောင်မလေး၏ မိသားစုအခြအနေကို သိလိုက်ရသောအခါ လူအများမှ မျက်ရည်ကျခဲ့ရသည့်အဖြစ် လူတိုင်းသည် ဘဝကြီးထဲတွင် အဆင်ပြေစွာဖြင့် အမြဲတမ်းနေထိုင်နေကြရသည်မဟုတ်ပေ။ အောင်မြင်ကြီးပွားနေသော လူများတွင်လည်း တစ်ချိန်က အဆင်မပြေမှုဆိုတာကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတွင်လည်း ဗီယက်နမ်မှ Thuy Hangဆိုသည့် ကောင်မလေးဟာ တက္ကသိုလ်မှ အမှတ်အများဆုံးဖြင့် ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်မလေးဟာ တက္ကသိုလ်တွင် ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း စာများကို သေချာစွာသင်ကြားခဲ့ရခြင်းမျိုးမဟုတ်ပေ။ နာမကျန်းဖြစ်နေသည့် မိဘနှစ်ဦးလုံးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေခဲ့ရပြီး အချို့နေ့များတွင် ကျောင်းပင်မသွားရဘဲ မိဘများကို ပြုစုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်မလေး၏ အမဖြစ်သူ၏ ကြိုးစားပေးမှုတို့ကြောင့်သာ ကျောင်းဆက်တက်ခွင့်ရခဲ့ကာ တက္ကသိုလ်တွင် အထူးချွန်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ Credit Unicode Version တက်ကသိုလျတှငျ ထူးခြှနျစှာဖွငျ့ ဘှဲ့ရရှိခဲ့သညျ့ ကောငျမလေး၏ မိသားစုအခွအနကေို သိလိုကျရသောအခါ လူအမြားမှ မကျြရညျကခြဲ့ရသညျ့အဖွဈ လူတိုငျးသညျ … Read more
အောင်လရဲ့အနီးစပ်ဆုံး ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ပွဲကောင်းတစ်ပွဲက ဂျပန်ဖိုက်တာကြီး အိုကာမီနဲ့ဖြစ်လာနိုင်လာမလား
အောင်လရဲ့အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ ပွဲကောင်းတစ်ပွဲက ဂျပန်ဖိုက်တာကြီး အိုကာမီနဲ့ဖြစ်လာနိုင်လာမလား အောင်လနဲ့ပတ်သက်ပြီး အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ ပွဲကောင်းတစ်ပွဲက ဂျပန်ဖိုက်တာကြီး အိုကာမီနဲ့ဆိုတာ သိုင်းလောကသားများအကြား လူပြောများနေကြပါတယ် …ဟုတ်ကဲ့ , ကျွန်တော့်အနေနဲ့လဲ ယင်းပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်များအား ပရိသတ်ကြီးထံပါး တင်ဆက်ရေးသားပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိခံခဲ့ပါတယ်…. တည့်တည့်ပြောရမယ်ဆိုရင် အောင်လနဲ့ အိုကာမီ ဒီMMAမောင်2ဦးရဲ့ အရည်အသွေးပိုင်းကတော့ လတ်တလောအခြေအနေအရ ကိုအောင်လကြီးဘက်က အပြတ်အသတ် သာနေပုံထောက်ပါတယ် . ဒါကတော့ စာရေးသူ ကျွန်တော့်ရဲ့ အမြင်မို့ ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်း လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်နော် … သို့သော်ငြား နတ်ကြီးလွန်းတဲ့ သိုင်းလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီး ယတိပြတ်လည်း မပြောဝံ့ပါဘူးဗျာ . တစ်ဖန် ဂျပန်ဖိုက်တာကြီး အိုကာမီဆိုတာကလည်း တစ်ချိန်က ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ ကစားသမားကြီးတစ်ဦးပါ .. Fight record အရဆိုရင်လည်း … Read more
နေမကောင်းဖြစ်နေသည့် ဇနီးသည်လေးကို ဆန်ပြုတ်လေးကျိုတိုက်ချင်လို့ ဈေးလာဝယ်ခဲ့သော်လည်း
နေမကောင်းဖြစ်နေသည့် ဇနီးသည်လေးကို ဆန်ပြုတ်လေးကျိုတိုက်ချင်လို့ ဈေးလာဝယ်ခဲ့သော်လည်း ဆိုင်တွေအကုန်ပိတ်ထားသောကြောင့် ဝမ်းနည်းစွာငိုနေခဲ့သည့် အဖိုး လူတိုင်းက မွေးဖွားလာသည်နှင့် အဆင်ပြေစွာ နေထိုင်နိုင်ကြသည်မဟုတ်သော်လည်း လူအချို့ကတော့ အောင်မြင်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် အခွင့်အရေးများ ရရှိလာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းအဆင်မပြေမှုတွေထဲတွင် သံသရာလည်နေရေသာ လူများဟာလည်း များစွာရှိနေသေးသည် ဖြစ်ပေသည်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်းမြို့ ရပ်ကွက်၅တွင် အဖိုးအိုတစ်ဦးဟာ နေမကောင်းသော ဇနီးသည်လေးကိုဆန်ပြုတ်ကျိုတိုက်ရန်အတွက် နေအိမ်တွင် ဆန်ကုန်နေခဲ့သည်။ထို့ကြောင့် ဆန်1kgလောက်ဝယ်ယူရန် ထွက်လာခဲ့သော်လည်း ဆိုင်များအားလုံးဟာ ပိတ်ထားခဲ့သည့်အတွင် ဝမ်းနည်းစွာငိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဖိုးအို၏အဖြစ်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသော Hai Anဆိုသည့် အမျိုးသားဟာ သူ၏နေအိမ်မှ ဆန်ဆီအနည်းငယ်လေးကို ပြန်လည်လှုဒါန်းမှု ပြုလုပ်ပေးခဲ့သောကြောင့် အဖိုးဟာ ကျေးဇူးတင်မဆုံးဖြစ်နေခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Shoon (Cele Daily) Unicode Version နမေကောငျးဖွဈနသေညျ့ ဇနီးသညျလေးကို ဆနျပွုတျလေးကြိုတိုကျခငျြလို့ စြေးလာဝယျခဲ့သျောလညျး ဆိုငျတှအေကုနျပိတျထားသောကွောငျ့ … Read more
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပျိုဖော်ဝင်ပြီလို့ ထင်လိုက်ပြီလား..?ဒါဆိုရင် ဒီစာလေးဖတ်ပါ
ဆိုးနေတဲ့ကံကို အမြင့်ဆုံးထိပြန်ကောင်းလာစေမယ့် အဆောင်တွေ
ဆိုးနေတဲ့ကံကိုအမြင့်ဆုံးထိပြန်ကောင်းလာစေမယ့် အဆောင်တွေ အဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အစီအရင်တွေက လူတစ်ယောက်ရဲ့ကံကို ကောင်းအောင်ပြုပြင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာက ရာနှုန်းပြည့်လက်ခံဖို့တော့ ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံကောင်းစေတဲ့အဆောင်လေးတွေက သင့်ကိုကံကောင်းစေဖို့ တွန်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြမယ့်အဆောင်လေးတွေကို အိမ်မှာ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်နဲ့မကွာဆောင်ထားပြီး နေ့စဉ်မပျက်မကွက် မေတ္တာပို့ပေးရုံနဲ့ သင့်ရဲ့ကံကိုအမြင့်ဆုံးထိကောင်းစေပါလိမ့်မယ်။ (၁) အစိမ်းရောင်ဝါးပင် ဝါးပင်အကြီးကြီးတွေမဟုတ်ဘဲ အစိမ်းရောင်ဝါးပင်အသေးလေး သုံးပင်ကိုတစ်အိုးတည်းမှာစိုက်ထားပေးခြင်းက ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုယူဆောင်လာပေးပြီး သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ (၂) မွှေးရနံ့ မွှေးရနံ့သင်းသင်းလေးတွေရှိတဲ့နေရာမှာ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေ ရှိနေတယ်လို့ ရှေးအယူအဆတစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အိမ်မှာ သန့်ပြန့်ပြီး မွှေးကြိုင်နေခြင်းက နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကိုနေပျော်စေတာကြောင့် ကံအထူးကောင်းစေတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ သင့်ရဲ့အိမ်ကို မွှေးပျံ့အောင်ထားပါ။ ငွေကြေးကံလည်းကောင်းပြီး ဘဝမှာပိုပျော်ရွှင်လာပါလိမ့်မယ်။ (၃) အံစာတုံး အံစာတုံးလေးတွေက သင့်ဆီကံကောင်းခြင်းတွေကိုယူဆောင်လာပေးနိုင်ပါတယ်။ အံစာတုံးလေးတွေက အသက်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံဆိုးမှုမျိုးကို တားဆီးပေးနိုင်တယ်လို့ ယူဆကြတာကြောင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ စစ်သားတွေရဲ့အဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လည်း ကံကောင်းကြတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ အများစုကတော့ … Read more
အိမ်မှု့ကိစ္စ လုံးဝမလုပ်တတ်တဲ့ ကျွန်တော်နဲ့သားလေးကို ထားသွားတဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီး (မျက်ရည်လွယ်ရင် မဖတ်ပါနဲ့)
မျက်ရည်လွယ်ရင် မဖတ်ပါနဲ့…. ကျွန်တော်ဇနီး သွေးကင်ဆာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဆီကနေ ထွက်ခွာသွားတာ ခုဆို (၃)နှစ် ကျော်နေပါပြီ။ ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမိတယ်အိမ်မှု့ကိစ္စလုံးဝမလုပ်တက်တဲ့ ကျွန်တော်နဲ့သားလေးကိုထားခဲ့ရတာ သူဘယ်လောက်ထိ ဝမ်းနည်းနေမလဲဆိုတာ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း မိဘနှစ်ပါးစလုံးနေရာကနေကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားမလို အားမရဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ရက်မှာ ကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ မနက်စောစောခရီးထွက်ဖို့ရှိတော့ ခလေးအတွက် ဘာမှမပြင်ဆင်ပေးရပဲအိမ်ကတန်းထွက်လာခဲ့တယ်။ မနေ့ညက ထမင်းကြမ်းနဲ့ ကြက်ဥကြော်ထားခဲ့ပေးပြီးအိပ်ရာကမနိုးသေးတဲ့ သားလေးကို ပြောပြီး ထွက်လာခဲ့တယ်။ သားလေးကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လူတန်းစေ့ထားနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်လည်းအလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေရတယ်လေ။ အိမ်ပြန်မိုးချူပ်တဲ့တစ်ညမှာ ကျွန်တော်က သားလေးကိုလိုရင်းတိုရှင်းပဲ နူတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ အလုပ်က ပင်ပန်းလာတဲ့အတွက်အင်္ကျီချွတ်ပြီး ကုတင်ပေါ် အရှိန်နဲ့ လဲပစ်ချလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ” ဗွန်းကနဲ “ဆိုသလို အနီရောင်ဟင်းရည်တွေခေါက်ဆွဲတွေက အိပ်ယာခင်းနဲ့စောင်တွေကိုတခဏအတွင်းမှာပဲ စွန်းပေကုန်တယ်။ လက်စသတ်တော့ ခေါက်ဆွဲပန်းကန်က စောင်အောက်ကိုရောက်နေတာကို။ ဒီကောင်တော့ တကယ်ပါပဲ……ပြောတာ နှေးတယ်…လုပ်တာ မြန်တယ်……ချက်ချင်းပဲ … Read more
ငယျငယျတုနျးက သငျခဲ့ရတဲ့ ကုဋရှေဈဆယျ သူဌေးသားကဗြာရဲ့ လိုအပျခကျြတဈခု….
ရွှေကျီးသာ နိမိတ်အဟောနှင့်မှန်ခဲ့လွန်းသည့် သာဓကများ
မိုးရွာပြီးတဲ့အချိန် ဗွက်အိုင်ထဲမှာ ဆော့ကစားနေတဲ့ကလေးငယ်ကို မိခင်ဖြစ်သူက ရိုက်ဖို့ တုတ်ကိုင်ပြီးသွားလိုက်သောအခါ
ဖုန်းနံပါတ်အပြဲလေးကိုင်ပြီး အမေဆီ ဖုန်းဆက်ချင်လို့ပါဆိုတဲ့ ကိုရင်လေး အဖြစ်